ITurkey Facts, Biology, kunye ne-Statistics
I-Biology Facts Nge-Bird Favorite Bird
I-turkey yintaka eyaziwayo kakhulu, ngokukodwa kwixesha leeholide. Ngaphambi kokuba uhlale phantsi ukuze ujabulele ukutya kweholide, hlawula intaka enhle ngokufumana ezinye zeengqinamba zeTurkey ezikhangayo.
Wild vs Domestic Turkeys
I-wild turkey yimihlobo kuphela yeenkukhu ezizalelwa eNyakatho Melika kwaye yikhokho we-turkey yasekhaya. Nangona i-turkeys zasendle kunye nezifuywayo zihlobene, kukho ukungafani phakathi kwezi zibini.
Ngelixa i-turkeys zasendle zikwazi ukuhamba, iinqwelo ze-domestic turkeys azikwazi ukundiza. Iingqungquthela zasendle zineentsiba ezinemibala emnyama, ngelixa iintlobo ze-turkeys zasekhaya zivame ukuba zineentsiba ezimhlophe. Iingqungquthela zasemakhaya nazo ziza kuba nezihlunu ezinkulu zebele . Imisipha emininzi yeentlobo ze-turkeys yenza kube nzima kakhulu ukuxhatshazwa, ngoko kufuneka ichitshwe ngokucacileyo. Iimvumba ezakhiweyo zasekhaya ziyimithombo efanelekileyo ye- protein . Baye bakhethwa ngokukhethwa ngokubanzi kweenkukhu ngenxa yokutya kwabo kunye nexabiso elifanelekileyo lokutya.
Uthiwa yi-turkey? Igama lezenzululwazi zezilwanyana zasekhaya zasendle nezanamhlanje zi- Meleagris gallopavo . Amagama aqhelekileyo asetyenziselwa inombolo okanye uhlobo lwe-turkey utshintsho kuxhomekeke kubudala okanye ngesini sesilwanyana. Ngokomzekelo, ama-turkeys angamadoda abizwa ngokuthi ama- toms , ama-turkeys amabhinqa abizwa ngokuthi i- hens , abesilisa abancinci babizwa ngokuthi i- jakes , i-turkeys yomntwana kuthiwa yi- poults, kwaye iqela le-turkeys libizwa ngokuba ngumhlambi.
Iifudu ze-Turkeys zinezinye izinto ezinobulumko ezivelele ekuboneni kokuqala. Enye yezinto zokuqala abantu baqaphele ngeengqungquthela zibomvu, ulwelu hlobo lwesikhumba kunye nokukhula okuqhaqhaqhayo okuphakathi kwentloko nentamo yomsi. Ezi zakhiwo zi:
Iinqununu: Ezi zihluma ezinamafutha entloko nasentanyeni yamabhinqa angamadoda namabhinqa. Amadoda avuthiweyo ngokwesondo angaba nemizimba emikhulu kunye nemibala eqaqambileyo ekhangeleka kubafazi.
I-Snood: Ukulinda ngentsimbi ye-turkey yintonga ende yenyama ebizwa ngokuthi i-snood. Ngexesha lobudlelwane, i-snood iyanda kwaye ibomvu njengoko igcwalisa igazi kwindoda.
I-Wattle: Ezi zibopho zesikhumba esibomvu ezixhomeke kwi-chin. Amaduna aneentaba ezinkulu akhangeleka kubesifazane.
Enye into ephawulekayo nephawulekayo ye-turkey yintambo yayo. Iintsiba ezivuthayo zimboza ibele, amaphiko, umva, umzimba kunye nomsila weentaka. Iingqungquthela zasendle zinokuba neentsiba ezingaphezu kwama-5,000. Ngexesha lobudlelwane, abesilisa baya kuzikhukhumeza iintsiba zabo kwisiboniso ukuze bakhwele amabhinqa. Iifudu ze-Turkeys zinezinto ezibizwa ngokuba yi- ndevu ehlala kwindawo yesifuba. Emva kwamehlo, intshebe ibonakala iyinwele, kodwa ngokwenene ininzi yeentsiba ezincinci. Iibhedu zidla ngokubonakalayo kumadoda kodwa zingaphantsi kancinci ngokuqhelekileyo kubafazi. Iingqungquthela zendoda nazo zineempembelo ezibukhali, ezinjenge-spike-kwimilenze yazo ebizwa ngokuthi i- spurs . I-Spurs isetyenziselwa ukukhusela nokukhusela indawo evela kwabanye abesilisa. Iingqungquthela zasendle zingakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kweekhilomitha ezili-25 ngeyure kwaye zinyuka ngesivinini ukuya kwii-55 eziliekhilomitha ngeyure.
Umbono: Amehlo e-turkey aphantsi kwamacandelo ahlukileyo entloko. Isikhundla samehlo sivumela isilwanyana ukuba sibone izinto ezimbini ngelo xesha, kodwa sibeka umda wokujonga ingqondo.
Iifudu ze-Turkeys zinomhlaba obanzi wombono kwaye zihamba entanyeni yazo, zinokufumana i-360 degree degree of view.
Ukuva: Iifudu ze-Turkeys azinazo izakhiwo zendlebe zangaphandle ezifana neengqungquthela zamathambo okanye izitya zokuncedisa ukuva. Zinezimbobo ezincinci entloko yazo ziphantsi kwamehlo. Iimfudu zineengqiqo ezivakalayo zokuva kwaye zikwazi ukubethela izandi ukususela kwiiyela elide.
Chukumisa: Iifudu ze-Turkeys zibuhlungu kakhulu ekuthintela kwiindawo ezinjengeentsimbi kunye neenyawo. Olu bubele luncedo ekufumaneni nasekuhambiseni ukutya.
Ukuthunga kunye ne-Taste: I- turkeys ayinayo ingqondo ephuculweyo. Ummandla wengqondo olawula ukunyuka kukuncinci. Ingqiqo yabo yentleko kukholelwa ukuba ayinakuphuhliswa kwakhona. Banobuncipha obuncinci kunamatholampilo kwaye banokubona ityuwa, i-sweet, acid and bitter taste.
Iindaba zeTurkey kunye neziGatshana
Ngokutsho kweNational Federation Federation, amaphesenti angama-95 aseMerika ahloliswe atya i-Turkey ngexesha le-Thanksgiving. Balinganisela ukuba malunga nezigidi ezingama-45 zee-turkeys zithengwa iholide nganye yokubonga. Oku kuguqulela kuma-675 yezigidi ezigidi zamakhilogremu. Xa kuthethwa oko, umntu unokucinga ukuba uNgove uza kuba yiNyanga kaThando kazwelonke yeTurkey. Nangona kunjalo, yinyanga kaJuni ngokwenene ezinikezelwe kubathandi beTurkey. Iintlobo zeTurkeys bubungakanani ukusuka kuma-fryer amancinci (ama-5-10 iipounds) ukuya kuma-turkeys amakhulu anesisindo esingama-40. Ininzi zeentaka zeholide zithetha ngokulinganayo inani elisele. Ngokutsho kweMinnesota iTurkey Research and Promotion Council, iindlela ezinhlanu ezigqithiseleyo zokukhonza i-turkey eziseleyo zi: i-sandwiches, isobho okanye i-stews, i-salads, i-casseroles kunye ne-stir-fry.
UDickson, uJames G. I-Wild Turkey: i-Biology kunye noLawulo . Mechanicsburg: Amabhuku eStackpole, ngo-1992. Print.
"EMinnesota iTurkey." Umbutho waseMinnesota waseTurkey Growers , http://minnesotaturkey.com/turkeys/.
"I-Turkey Facts & Stats." Isebe lezoLimo laseNebraska , http://www.nda.nebraska.gov/promotion/poultry_egg/turkey_stats.html.
"ITurkey History & Trivia" I- National Federation Federation , http://www.eatturkey.com/why-turkey/history.
IziCwangciso zokuFunda eziKhuselekileyo neZingenakunokuthi iPair Music and Math
Iindlela eziLungileyo zokuKhula